Himalaya Dainik » हाम्रै नेपालमा : पासपोर्ट बनाउन रु १०० तिरेर कपालमा जुत्ताको पालिस
हाम्रै नेपालमा : पासपोर्ट बनाउन रु १०० तिरेर कपालमा जुत्ताको पालिस
पासपोर्ट बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ ? कपाल रंगीन नबनाउनुहोला । नत्र जुत्ताको पालिस टाउकामा दल्नुपर्ला । म्हेन्दी लगाएर पासपोर्ट बनाउन जानेले एक सय रुपैयाँ तिर्दै, कपालमा जुत्ताको पालिस दल्दै गर्नुपरिरहेको छ ।
बालाजुकी पूजा पाठकसँग हस्तलिखित राहदानी थियो । मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) बनाउन बिहीबार केशरमहलस्थित राहदानी विभाग पुगिन् । फोटो खिच्ने लाइनमा बस्दा एक कर्मचारीले उनको खैरो कपाल हेर्दै भने, ‘कपालमा कालो लगाएर आउनुस् है, यस्तो कपालमा हुँदैन ।’
अमेरिकाबाट फर्केकी पाठकलाई त्यहीको कर्मचारीले प्रहरीको क्यान्टिनमा गएर जुत्तामा लगाउने पालिसले कपाल कालो बनाउन सुझाए ।
क्यान्टिनमा मःमः बनाउँदै गरेकी साहुनीले कालो पालिसको बट्टा र एउटा दाँत माझ्ने ब्रस हातमा थमाइन् । पाठक र लामा दुवैले रबरले कपाल बाँधे । देखिनेजति रातो कपालमा कालो बुटपालिस लगाए । यसरी कपाल रंगाएबापत प्रतिव्यक्ति सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने रहेछ ।
यतिमात्र होईन् पासपोर्ट बनाउँदा महिलाले गरगहनाका कारण पनि दुःख पाइरहेका छन् । जिल्लाजिल्लाबाट आएका धेरै महिलाले उस्तै समस्या भोगिरहेका थिए । वर्षाैैंदेखि लगाएका नाकको फुली, ढुंग्री, बुलाकी, कानको टपलगायत गरगहना फुकाल्न नसक्दा दुख पाएका छन् ।
जिल्लाबाट सिफारिस लिएर राहदानी विभाग पुगेका सेवाग्राहीहरू सूचना नभएका कारण यस्ता समस्या झेलिरहेका थिए ।
झट्ट हेर्दा ससाना लाग्ने समस्याका कारण सेवाग्राहीले असहज महसुस गरिरहेका छन् । राहदानी विभागका निर्देशक तीर्थराज अर्यालले भने यसबारे अहिले नै केही भन्न नसक्ने बताउँछन् । अर्यालले भने, ‘यसबारे हामी बैठक बसेर छलफल गर्नेछौं ।’राहदानी बनाउन जाँदा ध्यान पुर्याउनुहोस् ! अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।